By မိုးမိုး 20 March 2019
အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးတွေ အပြည့်အဝ ရရှိနေပြီလား…. ဒါကတော့ ယနေ့အထိ မေးခွန်းထုတ်နေရဆဲပါပဲ။ ဒါကို ဘာက သက်သေထပ်ပြနေသလဲဆိုရင် အမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် တယောက်အနေနဲ့ လွှတ်တော်နေရာမှာ အဆိုတင်သွင်း၊ မေးခွန်းမေးမြန်းစဉ်မှာတောင် လှောင်ပြောင်စနောက် ခံနေရဆဲအခြေအနေက အမျိုးသမီးတွေ အခွင့်အရေး အပြည့်အဝရနေသလား ခွဲခြားဆက်ဆံ ခံနေရဆဲလား ဆိုတာ ပြသနေပါတယ်။
အမျိုးသမီးနှင့် ကလေးသူငယ် အခွင့်အရေးတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အမျိုးသမီးလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေက လွှတ်တော်တွင်းမှာ မေးမြန်းခြင်း၊ အဆိုတင်သွင်းခြင်းတွေ ပြုလုပ်လာကြပါတယ်။
မကြာသေးမီက ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဥပဒေကြမ်းကို လွှတ်တော်မှာ တင်သွင်းစဉ် အသက် ၁၈ နှစ်အထက် လက်ထပ်ခွင့်ပေးရေး၊ မပေးရေးဆိုတဲ့ အချက်အပေါ် အငြင်းပွားနေတာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးခဲ့သူ ကျောက်တန်း မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်အေးမြမြမျိုးကို လွှတ်တော်အတွင်းမှာပဲ ဝေဖန်လှောင်ပြောင်တဲ့ စကားသံတွေနဲ့ ပြောဆိုတုံ့ပြန်ခံခဲ့ရတယ်လို့ သူက ပြောပြတယ်။ ဒီအကြောင်းအရာကို အမျိုးသားတွေသာ ဆွေးနွေးမယ်ဆိုရင် ဒါမျိုး လှောင်ပြောင် အပြောခံရမှာ မဟုတ်ဘူးလို့ ကောက်ချက်ချမိ ကြောင်းလည်း သူက သုံးသပ်တယ်။
၎င်းက “လွှတ်တော်ထဲမှာတောင် ကျမက အမျိုးသမီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကျမ တင်သွင်းတဲ့ အမျိုးသမီး အဆိုတွေ၊ ကျမ မေးတဲ့မေး ခွန်းတွေ ကို စနောက်စရာဖြစ်တယ်။ အလှောင်ခံရတယ်။ နောက်တာ ခံရတယ်။ ဟားတိုက်တာ ခံရတယ်။ ဒီလို မေးခွန်းကို အမျိုးသား တွေသာ မေးခဲ့မယ်ဆိုရင် ဒီလို ကိစ္စတွေ ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူးလေ” လို့ ပြောဆိုပါတယ်။
၂၁ ရာစု ပင်လုံ သဘောတူညီ လက်မှတ်ရေးထိုးရာတွင်လည်း ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာ အမျိုးသမီး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်ရမည် ဆို တဲ့ သဘောတူညီချက်ကိုလည်း ရာခိုင်နှုန်းအရ အချိုးကျ ပါဝင်မှုထက် အနှစ်သာရရှိသည့် ဦးဆောင်မှု အပိုင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ လုပ်ပြနိုင် တယ်။ ဆုံးဖြတ်ချက် ချသည့် အပိုင်းမှာ ဘယ်လောက်ထိ တန်းတူ ချနိုင်လဲ ဆိုတာကိုသာ ပို၍ စိတ်ဝင်စားကြောင်း ဒေါ်အေး မြမြမျိုးက ပြောပါတယ်။
ဒေါ်အေးမြမြမျိုးက “အမျိုးသမီး ပါဝင်ရမယ် ဆိုပြီး ကျမတို့ကို အမြင်ကောင်းအောင် ဖက်ရှင်ရှိုးလို မျိုး ထည့်ထားတာထက် စာရင်း ပါသ လောက် အမျိုးသမီးဟာ အရည်အချင်းရှိသလောက် ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ နေရာမှာ ရောက်နေတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ရှိတဲ့ ပါဝင်မှုကို ပိုစိတ်ဝင်စားပါတယ်” ဟု ပြောတယ်။
အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားနေသူ အမျိုးသားလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် နော်လှလှစိုးကလည်း အမျိုးသမီးများ တန်းတူအခွင့်အရေး မရရှိသေးကြောင်း၊ လွှတ်တော်ထဲတွင် အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု ၁၃ ရာခိုင်နှုန်းသာ ရှိသေးသည့် အတွက် ကော်မတီနှင့် ပတ်သက်ပြီး တာဝန် ပေး အပ်သည့် အခါတွင်လည်း ဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူး ကဲ့သို့ နေရာမျိုးတွင် တာဝန်ခန့်အပ်ပေးမှု အလွန်နည်းပါးနေကြောင်း ရှင်းပြပါတယ်။
ထိုကဲ့သို့ အမျိုးသမီးများ ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ပါဝင်ခွင့် ရရှိနိုင်ရန် အတွက် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင်ကလည်း ကြိုးပမ်းရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ တာဝန်ရှိသူများဘက်မှလည်း ( အစိုးရဘက်) ပူးပေါင်း ပါဝင်ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ နေရာတိုင်းတွင် ပါဝင်မှု အား နည်းနေသေး ကြောင်း၊ တနိုင်ငံလုံးတွင် အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်ခံနေရမှု များစွာ ရှိနေကြောင်း၊ ပါဝင်မှုနှုန်း လိုချင်သည့် အတိုင်းအတာထိ မရရှိသေးကြောင်း သူက သုံးသပ်ပါတယ်။
နော်လှလှစိုးက “အမျိုးသမီးတွေမှာ အကြမ်းဖက်မှုကတော့ မဲဆန္ဒနယ်မြေရဲ့ အတွေ့အကြုံ အရသော်လည်းကောင်း၊ ကော်မတီ တွေ လုပ်ငန်း အပေါ်မှာ၊ တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ရဲ့ ဖြစ်စဉ်တွေကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အရမ်းများပြားလာတာကို တွေ့ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အတွက် တရားမျှတမှုဟာ အင်မတန်မှ နည်းပါသေးတယ်”လို့ပြောပါတယ်။
ခွဲခြား ဆက်ဆံခံနေရဆဲဖြစ်တဲ့ အမျိုးသမီး အခွင့် အရေး အပြည့်အဝ ရရှိရန် အတွက် ကဏ္ဍ အသီးသီးတွင် အမျိုးသမီး ပါဝင်မှု အနည်းဆုံး ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင်နိုင်ရန် အတွက် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟုလည်း မတ်လ ၈ ရက်နေ့က ကျရောက်သည့် အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနားတွင် ဒုတိယ သမ္မတ ဦးဟင်နရီဗန်ထီးယူက ပြောကြားခဲ့တာရှိပါတယ်။
ငြိမ်းချမ်းရေး ဖြစ်စဉ်ကို အခြေခံပြီး အမျိုးသား ပြန်လည် ရင်ကြားစေ့ရေးကို တည်ဆောက်နေရတဲ့ နိုင်ငံမှာ အမျိုးသား၊ အမျိုးသမီး အချိုးအစားညီ ပါဝင်မှုမှာလည်း အရေးကြီးသည့် အချက် ဖြစ်ကြောင်း၊ နယ်ပယ် အားလုံးတွင် အမျိုးသမီးများ ဟန်ချက်ညီညီ ဖွံ့ဖြိုး လာစေရေး အတွက် အမျိုးသမီးများ ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အမျိုးသား အဆင့် မဟာဗျူဟာ စီမံကိန်း (၂၀၁၃-၂၀၂၂) ဦးစားပေး လုပ်ငန်း နယ်ပယ် ၁၂ ရပ်ကို အခြေခံ၍ အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်လျက် ရှိကြောင်း သူက ဆိုပါတယ်။
ယခုကဲ့သို့ ကဏ္ဍအသီးအသီးတွင် အမျိုးသမီးများ အမှန်တကယ် ပါဝင်ရန် လိုအပ်သလို၊ ပါဝင်ခွင့် ရရှိထားသည့် နေရာတိုင်းတွင်လည်း အမျိုး သမီးများသည်လည်း ဆုံးဖြတ်ချက် ချပိုင်ခွင့် ရှိသည့် နေရာမျိုးတွင် ရှိသင့်သလို၊ အင်အားပြ အနေနဲ့ မဟုတ်ဘဲ လူ့ အဖွဲ့အစည်း ထဲမှာ အမျိုးသမီးတွေသည် အမျိုးသားများ နည်းတူ စွမ်းဆောင်ရည် ရှိကြောင်း ပြသခွင့်ရသည့် နေရာမျိုးတွင် ထားရန် လိုအပ်ကြောင်း ကိုလည်း အမျိုးသမီးရေး လှုပ်ရှားသူများက အကြံပြုကြပါတယ်။
“တကယ်တမ်း နိုင်ငံရေး လောကထဲ ရောက်တဲ့ အခါမှာ ကျမ အရှေ့မှာ မြင်ခဲ့တဲ့ အမြင်က မှားခဲ့တယ်ဆိုတာ ပိုမြင်လာတယ်။ ဘာ ကြောင့်လဲ ဆိုတော့ ကျမ အမျိုးသမီး ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ပိုပြီးတော့ ရုန်းကန်လာရတာ ရှိတယ်။ အရည်အချင်း ရှိလို့ တာဝန် အတူတူ ယူထား တာကိုတောင်မှ ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းနေရမယ်ဆိုတဲ့ အမြင်က များလွန်းတယ်” ဒေါ်အေးမြမြမျိုးက ပြောပါတယ်။
မသန်စွမ်း အမျိုးသမီးတဦး ဖြစ်သူ သဇင်သီရိခေတ် ကလည်း “ အဓိက အမျိုးသမီး မသန်စွမ်းတွေက အလုပ်အကိုင်နေရာတွေမှာလည်း အားနည်းနေတာ အများကြီး တွေ့ ရသေးတယ်။ တချို့ သက်ငယ် မုဒိမ်း ကိစ္စတွေမှာလည်း အမျိုးသမီး မသန်စွမ်းတွေ ပါနေတယ်။ အဲဒါမျိုးတွေအတွက် မသန်စွမ်း တွေ အတွက် လုံခြုံစိတ်ချမှု မရှိသေးဘူး”လို့ ပြောပါတယ်။
နိုင်ငံ လူဦးရေ၏ ထက်ဝက်ကျော်မှာ အမျိုးသမီးများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် ထက်ဝက်ကျော်အင်အားရှိသည့် အမျိုးသမီးထု ဖြစ်သဖြင့် စောင့် ရှောက် ခံ ပေးရခြင်း၊ အမိန့်ပေးခံရခြင်း၊ နောက်လိုက်နေရတဲ့ သူမျိုးပဲ မဟုတ်တော့ဘဲ၊ ထိုကဲ့သို့ အတွေးအခေါ်များကို ပယ်ဖျက် သင့်ပြီး လူသားတယောက်ကို လူလို့ သာ မြင်စေချင်ကြောင်း၊ ပြောင်းလဲ သင့်သည်များကို ပြောင်းလဲ သင့် ကြောင်း ပြောကြပါတယ်။
မည်သည့် အဖွဲ့ပဲ ဖွဲ့ဖွဲ့ ဖွဲ့လိုက်သည့် အဖွဲ့အစည်းတိုင်းတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရန် အတွက် ဖွဲ့စည်းမည့် သူများ၏ စာရင်းဇယားတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရမည်ကို ဆုံးဖြတ်ရန် လိုကြောင်း၊ ထိုကဲ့သို့ ဆုံးဖြတ်ရန်အတွက် နေရာယူထားသူများမှာ အမျိုးသားများ ဖြစ်နေ ကြောင်း သိရပါတယ်။
မတ်လ အတွင်းက ရန်ကုန်မှာ ကျင်းပခဲ့သည့် ‘ယောနိစကားဝိုင်း’ ကိုလည်း မိန်းမ အင်္ဂါဖြင့် ခိုင်းနှိုင်းပြီး ခေါင်းစဉ်တပ်၍ စကားဝိုင်း ကျင်း ပခြင်းဟာ အလွန် ရိုင်းစိုင်းကြောင်း၊ အနောက်တိုင်းဆန်စွာ မပြုလုပ်သင့်ကြောင်း၊ ကိုယ့်နိုင်ငံ၏ ယာဉ်ကျေးမှု နှင့် လုံးဝကိုက်ညီမှု မရှိ သဖြင့် လုပ်ဆောင်သင့်သည့် ကိစ္စမဟုတ်ကြောင်း လူမှု ကွန်ရက် စာမျက်နှာမှာ ဝေဖန်သံတွေ ဆူညံခဲ့ပါသေးတယ်။
နော်လှလှစိုးက “ ယောနိ စကားဝိုင်းဟာ အရမ်းရိုင်းတယ်။ အဲဒီ ခေါင်းစဉ်နဲ့ စကားဝိုင်း လုပ်တာ မလုပ်သင့်ဘူးဆိုပြီ ဘာမှနားမလည်ပဲ ပြောနေကြတယ်။ အဲဒီလို ပြောတဲ့ သူတွေကလည်း အမျိုးသားတွေ ပဲ ဖြစ်နေတယ်။ အဲဒါတွေကလည်း လုံးဝ မဖြစ်သင့်ပါဘူး” လို့ ပြောပါတယ်။
“ကျမကိုယ်တိုင်လည်း ဒီနှစ်စပိုင်းမှာ အမျိုးသမီးများ အကြမ်းဖက်မှုမှ ကာကွယ်ရေး ဥပဒေ ဖြစ်ထွန်းဖို့ မေးခွန်း မေးထားတယ်။ ဝန်ကြီးဌာန ကလည်း ၂၀၁၉ နှစ်စပိုင်းမှာ ဒီဥပဒေကို ပြဌာန်းပေးမယ်ဆိုပြီး လွှတ်တော်ကို ကတိပေးသွားတယ်။ အဲဒီအတိုင်း ဖြစ်အောင်လည်း ကြိုးစားမှာပါ။ ဥပဒေနဲ့ ထိန်းကျောင်းရမယ်။ အမျိုးသမီးတွေကို ကာကွယ်ရမယ်။ မြှင့်တင်ပေးရမယ်” လို့ သူက ဆက်လက် ရှင်းပြတယ်။
မြန်မာ အမျိုးသမီး အဖွဲ့များ ကွန်ရက်မှ စီမံကိန်း မန်နေဂျာ နော်ထဲလာရီးလှ ကလည်း ကဏ္ဍတိုင်းတွင် ၃၀ ရာခိုင်နှုန်း ပါဝင် နိုင်ရန် အမျိုးသမီးများ ကိုယ်တိုင် စိတ်ပါဝင်စားမှု လိုအပ်ကြောင်း၊ အရှေ့ကို ထွက်လာရန် တွန်းတိုက်ပြီး တွန်းအားပေးမှသာလျှင် ရှေ့ကို ရောက်လာသည့် အမျိုးသမီးများလည်း ရှိနေကြောင်း၊ အမျိုးသားနှင့် အမျိုးသမီးများ တန်းတူ အခွင့်အရေး ရရှိရန် မိမိနှင့် အနီးစပ်ဆုံး ရှိနေသည့် အမျိုးသားများမှ စ၍ ချိုးနှိမ်ဆက်ဆံသည့် စရိုက်များကို ပြုပြင်ရန် လိုအပ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
နော်ထဲလာရီလှက “အမျိုးသမီးတွေဟာ အခုထိ ခွဲခြား ဆက်ဆံ ခံနေရတာတွေ ရှိနေသေးတဲ့ အတွက် ဒီလို ကိစ္စတွေကို ဖြေရှင်းပေးဖို့ လုပ်ငန်းတရပ် အနေနဲ့ ဆောင်ရွက်ဖို့ အများကြီး လိုနေသေးတယ်လို့ မြင်ပါတယ်”လို့ သုံးသပ် ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ အတွင်း လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ အပြင်၊ စိတ်ပိုင်း ဆိုင်ရာ အကြမ်းဖက်မှုများ၊ နှုတ်ဖြင့် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ် အမူအရာဖြင့် ဖြစ်စေ၊ လိင်ပိုင်း ဆိုင်ရာ ထိပါး နှောင့်ယှက်ခြင်း၊ ညစ်ညမ်းပုံများ ပြသခြင်း၊ နှိမ့်ချ စော်ကားသော အသုံးအနှုန်းများဖြင့် အမည် တပ်၍ ခေါ်ဆို ဆက်ဆံခြင်း အစရှိသည်များကို အမျိုးသမီးများမှာ ရင်ဆိုင် ကြုံတွေ့ နေရဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှု ကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့ အင်အားဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်တဲ့ ၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ ပထမ သုံးလပတ် နှစ်စဉ်လုပ်အား စစ်တမ်း အရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် လုပ်သားအင်အား ပါဝင်မှု ရာခိုင်နှုန်းဟာ ၆၁.၅ ရာခိုင်နှုန်း ဖြစ်ပြီး၊ အမျိုးသား ပါဝင်မှု နှုန်းမှာ အမျိုး သမီး ပါဝင်မှု နှုန်းထက် ၃၀. ၃ ရာခိုင်နှုန်း တွေ့ရတာကြောင့် စုစုပေါင်း အလုပ်လုပ်သူ ၂၁.၉၁ သန်းတွင် အမျိုးသမီးများ၏ ပါဝင်မှု က ၄၁.၈ ရာခိုင်နှုန်း သာ ပါဝင်နေပါတယ်။
လူမှု ဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေးနှင့် ပြန်လည် နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဒေါက်တာ ဝင်းမြတ်အေး က “ မြန်မာ အမျိုးသမီးများ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများတွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်တဲ့ ရာခိုင်နှုန်း နည်းနေပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းမှာ အ မျိုးသမီးများ ပါဝင်လာစေရန် အတွက် ဝင်ငွေရ လုပ်ငန်းများ၊ အလုပ်အကိုင်များနှင့် စွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ပေးရေး တို့ကို အားပေး ဆောင်ရွက်ခြင်း အားဖြင့် အမျိုးသမီးများ အတွက် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း အခွင့်အလမ်းများကို ဖော်ဆောင်ပေးသွားမှာပါ” လို့ အပြည်ပြည် ဆိုင်ရာ အမျိုးသမီးများနေ့ အခမ်းအနား မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ် ထည့်သွင်း ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပပြီး မည်ကဲ့သို့ ဆောင်ရွက်မည်ဟု ပြောနေသည်ထက် မြေပြင်၌ အမှန်တကယ် အကြမ်းဖက် ခံနေရသူများကို လက်တွေ့ ကျကျ ကူညီဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ ဥပဒေပိုင်း ဆိုင်ရာ ကိစ္စများကိုလည်း ထိထိရောက်ရောက် ဖြေရှင်းနိုင်သည့် တရား ဥပဒေ စိုးမိုးသည့် ဥပဒေ တရပ် ပေါ်လာရန်လည်း အရေးကြီးကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများ ခွဲခြား ဆက်ဆံခြင်းခံနေရသည်များကို ပပျောက် စေရန်အတွက် အမျိုးသားများ၏ စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှ စတင်၍ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသမီးရေးလှုပ်ရှားသည့် အဖွဲ့များက ထောက်ပြပြောဆိုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ ။
Topics: နော်လှလှစိုး, လွှတ်တော်, အမျိုးသမီးအခွင့်အရေး, အေးမြမြမျိုး